क. ण्डमको प्रयोग बिना बच्चा न.बस्ने गरी कसरी शा;री.रिक स.म्पर्क गर्ने ? – Gazabkonews
महिलाले आफ्नो म.हि.ना.वारीको समय ख्याल नगर्दा र भईपरी आउने समयमा अ.स्था.यी सा.ध.नको प्रयोगले नहुनाले नेपालमा ग/र्भ.प.तन गराउने किशोरीहरुको संख्या बढेको बरिष्ठ प्र.सुती तथा स्त्री रो.ग बिशेषज्ञ डा. नुतन शर्माले बताउनु भयो ।
एक अन्र्तवार्ताको क्रममा डा.शर्माले एक पटक पनि म.हिना.वारी नभएकी १३ बर्षिय किशोरी समेत ग/र्भव/ती भएर आफुकहाँ आएको समेत बताउनु भयो । उहाँले किशोरीले बिशेष ध्यान नदिदाँ, पार्टनरको कारण यस्ता घ.ट.ना हुने बताउनुभयो ।
त्यसको लागि हामीले घरमा दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने टु.थपेस्टमा आफ्नो पिसाब मिसाउने यसरी मिसाउदा उक्त पेस्ट निलो भएको खण्डमा सम्झनुहोस् ग.र्भरहने सम्भावना हुन्छ ।
यदि तपाई घरमै बसेर ग.र्भ.वती भए नभएको टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने दैनिक जसो घरमा प्रयोग गरिने भे/नेग/रको प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि भे/नेग/रमा आफ्नो पि.साब मिसाउने यसरी भे/नेग/रमा पिसाब पिसाउँदा रंगमा परिवर्तन आयो भने टे.स्ट पो.जेटिभ भएको सम्झनुपर्छ । यदि रेगंमा परिवर्तन देखिएन भने टेस्ट ने.गेटिभ अर्थात ग.र्भ रहेको हुँदैन् ।
यस्तै प्राचिन समयमा पनि ग.र्भ.वती भएनभएको टे.स्ट गर्ने चलन थियो । त्यतिबेला गहुँ वा जौँमा पिसाब मिसाउने । यदि उक्त गहुँ वा जौँ टुसाएमा ग.र्भवती भएको संकेत गर्ने चलन रहेको थियो । यस्तै अर्को तरिका बाट पनि ग.र्भ जाँच गर्न सकिन्छ ।
उहाँले क.ण्ड.म बिना कसैसंग पनि स.म्पर्क गर्न नहुने बताउँदै यदी त्यसो गर्नुछ भने महिलाको म.हि.ना.वारी चक्र हेरेर गर्न समेत सुझाव दिनुभएको छ ।
हेरौं डा. नुतन शर्माले भनेको भिडियोः
म.हिना.वारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा ग.र्भ रहन्छ ? जानी राखौँ
काठमाडौँ- म.हिना.वारी भएको कति दिनमा से;.क्स गर्दा ग.र्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन हो ? भन्ने विषय एकीन गर्न गाह्रो छ । किन की महि.लाको म.हि.ना.वारी च.क्र कति दिनको छ, यसले निर्धारण गर्छ ।
नियमित म.हि.ना.वारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ ।सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा ग.र्भ.धा.रण हुन मुख्य रुपमा यौ.;न स;म्प.र्क, वी.;र्य स्ख;.ल.न, डि.म्ब नि.षे.चन र डि;म्ब.रोपण जस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ ।
महिलाको डि;म्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डि;म्ब नि;ष्कासन हुने समय नजिक ग.र्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । शु;क्र.की.ट.सँग मिलन हुन डि;म्ब नि.स्किएको हुनु आवश्यक छ ।
डि;म्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा म.हि.नावा.री सुरु हुन्छ । यस्तै २८ दिनको म.हि.ना.वा.री भएको महिलाको १४औं दिनतिर डि;म्ब निस्कने भएकाले त्यतिबेला यौ;न स;म्प.र्क ग.र्दा ग.र्भ रहने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ।
डि.म्ब निस्किएको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भने महिलाको प्र.ज.नन अ.ङ्गभि.त्र शु.क्र.की.टहरू ७२ घण्टा वा त्योभन्दा बढी बाँच्न सक्छ, त्यसैले डि;म्ब निस्कने केही अघिको र केही दिनपछिको समयलाई ग.र्भ.धा.र.णका दृष्टिकोणले असुरक्षित का.ल मानिन्छ ।